मुख्यमन्त्री, प्रदेश १ देश संघीयतामा गएसँगै प्रदेश सरकारहरू गठन भएका छन् । प्रदेश सरकारले करिब आधाजति समय आफ्नो व्यवस्थापन, कानुन निर्माण र जनअपेक्षाका विकासका कार्यमा आफूलाई व्यस्त बनाउँदै गइरहेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको भूमिका मापनसमेत हुन थालिसकेको छ । एक्कासि विश्व व्यापीरूपमा देखापरेको कोभिड १९ बाट सरकारको काममा समेत असर पुगेको छ । यही मेसोमा सरकार सञ्चालन र अहिलेको परिस्थितिको विषयमा बाह्रखरीका कुमार लुइँटेलले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ मुख्यमन्त्री राईसँग गरिएको कुराकानी ।
प्रदेश सरकारले क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको व्यवस्थापन कसरी गरिरहेको छ ? समस्या र चुनौतीहरू के-के छन् ?
यो संकटका बेला प्रदेश सरकारले लिएका कतिपय निणर्यले संघीय सरकारलाई नै मार्गनिर्देशन गरेको देखिन्छ । के प्रदेश सरकारले गरेका निणर्यबाट केन्द्र सरकार अझ सक्षम बनेको भन्ने हो ?
निश्चय नै कोभिड १९ सँग लड्ने मामिलामा हामी केही अगाडि छौं । जस्तो कि नेपाल सरकारले लकडाउनअगावै हाम्रो प्रदेशमा क्याबिनेटबाटै २३ बुँदे कार्ययोजना पारित गरी पूर्वतयारीमा जुटेका थियाौं । हामीले १० दिनमा कोभिड अस्पताल ५० शय्याको तयार गर्यौं । मापदण्डअनुसारको क्वारेन्टिनहरू सेनाको सहयोगमा झन्डै ६ सय शय्याबराबरको तयार गर्यौं । पछिल्लो समय भारतबाट नागरिकहरू ठूलो संख्यामा आउन सक्ने कुरालाई अनुमान एवं विश्लेषण गरेर होल्डिङ क्षेत्रको योजना हामीले नै सारेका हौं । प्रवेश विन्दुहरूलाई कडाइ गरेर अनुचित गैरबाटो भएर आउने कुरा बढी जोखिमपूणर् हुन्छ भन्ने कुरालाई विश्लेषण गरी वैधानिक प्रवेशविन्दु तोक्ने काम हामीले नै गर्यौं । हामीले प्रत्येक क्षेत्रको डेडिकेटेड कमिटी बनाएर स्वास्थ्य, सुरक्षा र क्वारेन्टिनसँग सम्बन्धित संयुक्त कार्ययोजना बनाएर काम गरिराखेका छौं । हामीले छुट्टै कोभिड टेस्टिङ प्लान बनाएर तीव्र गतिमा परीक्षण गरिराखेका छौं । झन्डै २२ हजारभन्दा बढीको पीसीआर परीक्षण भइसकेको छ । हामीले आफ्नै पहलमा स्विस सरकार र चीनको स्वाशासित क्षेत्र तिब्बत सरकारबाट ठूलो मात्रामा स्वास्थ्य सामग्रीहरू सहयोग प्राप्त गरेका छौं । जे होस् प्रदेश सरकार आफ्नो तहमा पूरै सक्षम छ । कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा प्रदेश सरकारले गरेको कामले त्यो कुराको पुष्टि भएको छ ।
संघीय सरकार र स्थानीय तहका सरकारबाट कोरोना नियन्त्रणमा प्रदेशसँग कसरी समन्वय भइरहेको छ ? कस्ता सहयोग आदान-प्रदान भएका छन् ?
कोभिड १९ ले तीनवटै तहका सरकारहरूलाई असाध्यै राम्ररी जोडेको छ । तीन तहबीच हुनुपर्ने सहकार्य, समन्वय र सह-अस्तित्वको सिद्वान्त व्यवहारमै लागु भएको छ । हामीले कोभिड १९ को लडाइँमा सफलता हासिल गर्नुको मूल कारण तीनै तहका सरकारहरूको नेतृत्व, निणर्य, कार्ययोजना र सफल कार्यान्वयन र आपसी समन्वय र सहकार्यले हो । स्थानीय तहहरूले धेरै ठूलो भूमिका खेलेका छन् । हामीले यस प्रदेशमा स्थानीय तहहरूलाई जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई समेत गरेर १० करोड २० लाख रुपैयाँ पठाउने काम गर्यौं । पछिल्लो समय दक्षिण सीमासँग जोडिएका पालिकाहरूलाई क्वारेन्टिनलगायत कामका लागि थप बजेट पठाउने काम गरिराखेका छौं ।
हो, कोभिड १९ रोकथाम नियण्त्रण र उपचारमा हामीले सुरुबाट गरेका प्रयास, गरेका काम र पहलकदमीको सबैबाट प्रशंसा भइरहेको छ । हामीले राम्रै गरेका छौं । जहाँसम्म स्वास्थ्य सामग्रीहरूको कुरा छ, केही सीमित सामग्रीहरू संघबाट प्राप्त गर्यौं । डोनेसनका रूपमा मेरो आफ्नै पहलमा स्विस सरकारबाट पाँच करोड रुपैयाँबराबरको र तिब्बत सरकारबाट आठ करोड रुपैयाँबराबरको स्वास्थ्य सामग्री हामीले प्राप्त गर्यौं । सरकार आफैंले सामान खरिद गर्नेतिर जोड दिएको छैन । किनकि बजेटको सीमितता, खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो हुने, सँगसँगै अन्य गलत उद्देश्यहरू पनि जोडिन सक्ने र त्यसले व्यक्ति र सरकारलाई बदनाम गर्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर मैले त्यस्ता प्रक्रिया र चाहनालाई प्रोत्साहित गरेको छैन । केही थोरै मात्रामा सामग्रीहरू सामाजिक विकास मन्त्रालयले खरिद गरेको छ । जे होस् सामग्रीका कारण हामी समस्यामा छैनौं । सहयोगबाट हामी धानिएका छौं ।
सरकारले भर्खर बजेट ल्याएको छ । यसपटकको बजेट कोभिड १९ केन्द्रित छ । हामीले जनताको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौं । सँगसँगै कृषि र रोजगारी सिर्जनालाई कोभिडसँगै जोडेर हाम्रो बजेटलाई त्यस क्षेत्रमा केन्द्रित गरेका छौं । स्वभाविक रूपमा हामीले सुरु गरेका महत्त्वपूणर् पूर्वाधारलगायत क्षेत्रका कामले प्राथमिकता र निरन्तरता पाउनेछन् ।
तपाईं नेतृत्वमा आएपछि प्रदेश १ सरकारले गरेका उपलब्धि के-के हुन् ? प्रदेश सरकारले जनताको विकासप्रतिको चाहनालाई न्याय गरेको छ भन्ने लाग्छ ?
हाम्रो कार्यकालको झन्डै आधा समय पूरा भएको छ । शून्यविन्दुबाट हिँडेको प्रदेश सरकारले यस अवधिमा महत्त्वपूणर् उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ । हामीले सबभन्दा पहिला कानुन निर्माण गर्नु थियो त्यसमा उल्लेख्य उपलब्धि भएको छ । अत्यावश्यक कानुन ४० को संख्यामा बनाएका छौं । थुप्रै कार्यविधि र नियमावाली बनेका छन् । जसकारण प्रदेश सरकार एउटा गतिमा हिँड्न सक्ने आधार तयार भएको छ । उभिने संरचनाहरू अस्थायी भए पनि तयार भएका छन् । हामीले विकास निर्माणका थुप्रै कामहरू सन्तुलित रूपमा सुरु गरेका छौं । सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, भवन, पर्यटन पूर्वाधार, खेलमैदान र अन्य गौरवका आयोजनाहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढिराखेका छन् । सँगसँगै प्रदेश रूपान्तरका महत्त्वपूणर् परियोजनाहरूको बैंक तयार भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हामी निर्मम छौं । सडक सुशासन, लागु पदार्थ दुर्व्यसन न्यूनीकरण गरी नैतिकवान् र सभ्य नागिरक तयार गर्न दुई लाख विद्यार्थी परिचालन गर्ने अभियान, ई-एजुकेसन, साक्षरता कार्यक्रम, विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागिरक दन्त उपहार कार्यक्रमलगायतका कार्यक्रमहरू नेपालमै नौलो र पहिलो हुने कार्यक्रमहरू सुरु गरेका छौं । जे होस् जनतामा राम्रो, बलियो आशा विश्वास र भरोसाको जग बसाल्न हामी सफल भएका छौं । यसरी जनतालाई विकासको चाहनामा न्याय गरेका छौं ।
प्रदेशको नाम टुंग्याउन बाँकी छ । यदि कोभिड १९ को प्रकोप नआएको भए हिउँदे सभाबाट टुंग्याउने भनेका थियौं जे होस् हामी छिटै टुंग्याउछौं । प्रदेश राजधानीसँग जोडिएका संरचनाहरू प्रदेश सरकारको निणर्यबमोजिम निर्माणको काम पनि हामी छिटै सुरु गर्नेछौं । बारखरीबाट